स्टारबक्स कुपन फ्रड: किन बारकोड छैन? | Martech Zone
स्टारबक्स कुपन फ्रड: किन बारकोड छैन?
बिहीबार, अगस्ट 31, 2006 बिहीबार, अगस्ट 31, 2006 Douglas Karr
सेठको ब्लग स्टारबक्समा खराब ह्यान्डल कुपन स्नाफुको बारेमा नोट छ। स्टारबकको आकार दिईए, किन उनीहरूले बारकोडिंगको साथ कुपन रणनीति समावेश गरेनन् मैले बुझिन। यो एकदम सरल र सस्तो टेक्नोलोजी हो ... यसलाई केवल पोइन्ट अफ सेवा कम्प्युटरमा मान्यकरण आवश्यक पर्दछ।
तपाईं यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? अधिकतर ईमेल मार्केटिंग सफ्टवेयर विक्रेताहरूले सबस्टिट्यूशन स्ट्रिंगहरूलाई अनुमति दिन्छ (यदि ती गर्दैन भने, मा सर्नुहोस् ExactTarget)। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ सजिलै छवि मार्गमा स्ट्रि pass पास गर्न सक्नुहुनेछ। ईमेल खोलेको बखत स्ट्रिंगले वास्तवमा बारकोडलाई गतिशील बनाउँदछ, त्यसैले स्टारबक्सले सजिलैसँग कुपन कोडको केही प्रकारको ईन्क्रिप्ट गर्न सक्दछ - एउटा ग्राहकको लागि अद्वितीय - र यसलाई बारकोडको रूपमा आउटपुट गर्दछ।
जब रिडिम गरियो, क्यासियरले यसमा रहेको बारकोडको साथ ईमेल स्क्यान गर्न सक्दछ। मूल्य प्रणाली भित्र देखिन्छ र त्यसपछि प्रामाणिकता र मोचन को लागी जाँच गरियो। थप रूपमा, कुपनको रिडिमसन वास्तविक ईमेल ठेगानामा पुन: दर्ता गर्न सकिन्छ - मार्केटरले कुपनको उद्धार गर्ने सम्बन्धमा केहि मूल्यवान जानकारीको साथ प्रदान गर्दै, कति समय लाग्यो, उनीहरूले यसमा कसरी उद्धार गरे आदि। यो शक्तिशाली डाटा हो! निश्चित रूपमा जानकारी जुन सडकमा एक उत्तम स्रोत हुनेछ!
केही शेल्फ टेक्नोलोजी र केहि सरल योजनाको साथ, स्टारबक्सले आफैंलाई लाज बचाउँन सक्दछ।
डर रणनीति होइन
ब्लग र फूलहरू: बीज, झार, परागकण र बढाउनुहोस्
अगस्ट,, २०१ 31 2006:२१ अपराह्न
तपाईंको विचार उत्कृष्ट छ। मलाई अचम्म लाग्छ स्टारबकका आईटी साथीहरूले के गर्दै थिए?